Sawirro: Maxay tahay sababta markasto Ra’isul wasaare kheyre u kormeero Wasaaradda Maaliyadda? – Kismaayo24 News Agency
Sawirro: Maxay tahay sababta markasto Ra’isul wasaare kheyre u kormeero Wasaaradda Maaliyadda?
by admin 13th December 2017 054
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Kheyre, ayaa maanta booqday Xarunta Wasaaradda Maaliyadda, halkaasi oo ay kusoo dhoweeyeen Wasiirka, Wasiir ku xiggeenka, Wasiir dowlaha iyo Masuulinta kale ee Wasaradaasi.
Ra’iisul wasaare Kheyre, ayaa shaqaalaha iyo Masuuliyiinta Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ugu hambalyeeye guusha ay ka gaareen Wada hadalladii hay’adda lacagta aduunka ee IMF, barnaamijka taxana ah ee isbadalka iyo dowlad wanaagga lagu hirgalinayo ee SMP, kaas oo Mustaqbalka Soomaaliya u horseedaya in laga cafiyo daymaha dibadda dibna loo maal gashado.
Madaxda Hey’adda Lacagta aduunka ayaa ku qancay qaabka maamulka Maaliyadeed ee Dowladda Soomaaliya , iyadoona Madaxdii Wasaaradda Maaliyadda ku ammaanay sida dardarta ah ee ay xoogga u saaraan in Soomaaliya dhaqaalaheeda uu kordho.
DAAWO: Salaadiinta iyo Waxgaradka Gobalka Sanaag oo gaashaanka u daruuray Caleemo saarkii Muuse Biixi.
Daawo: Abuu masuur oo galabta ka dagay kismaayo iyo ujeedka socdaalkiisa+Qaabka loo soo dhaweeyay
TOP NEWS: Maxaadan Ogeyn oo Maanta ka dhacay Madaxtooyada Muqdisho +Sawirro
Madaxweyne farmaajo oo ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid allaha ha u naxariistee marxuum….
Tifaftiraha K24 16th August 2017